जबसम्म त्रिपुरेश्वरमा सवारी नियम उलंघन गरेको चालकलाई कलंकी नपुग्दै पक्रिन सक्ने संयन्त्र बन्दैन तवसम्म छाती ÷छातीमा क्यामेरा भिर्नु अनि बाटोमा दर्जनौ डमी ट्राफिक राख्नुको कुनै अर्थ रहन्न । बिहान सात ...
रेखाजी कुर्ता,साडी र लोग्ने बदले जस्तै पार्टी बदलेको पटक्कै सुुहाएन
मलाइ त अचम्म लाग्छ हैन नेपालका राजनीतिकर्मी र कलाकर्मीको भर किन पटक्कै नभएको । धोती,साडी र लोग्ने बदले जस्तै पार्टी बदलेको बदल्यै गर्छन । बदल्नु अनि केही दिन चर्चामा आउनु सबैको ध्यान आफु तिर तान्नु ठ...
‘कमरेड ! मैले छोएको सिन्दूर चल्दैन…।’
काम्रेड्नीसँगको भेटघाट मेरो पुरानै हो । त्यतिवेला उसले मेरो जात वारेमा थाहा पाएकी थिईन । त्यसैहुनाले लहान महाधिवेशनको पहिलो भेट्घाटदेखि नै उसले ममाथि नजर लगाउँन थालेकी थिई, मुस्कान बाढ्न थालेकी थि...
बिहानै अफिसमा पत्रपत्रिका हेर्दै थिएँ मेरो आखाँ नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा भएको मेरी ममीलाई मंगलबार स्कुलको पोलमा बाँधेर कुट्दै दिसा खुवाए, शुक्रबार ममी बित्नुभयो, प्रत्यक्षदर्शी १० वर्षीय बालक सुमन...
मेरो नाम दीपक आचार्य हो । घर चितवन । हाल बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुँवेतमा छु । २१ वर्ष पहिले नवलपरासी जिल्ला कावासोतीकी चुनुउषा देवकोटासँग मेरो बिवाह भयो । हाम्रा दुई सन्तान पनि छन् । हाम्रो घरको...
आधुनिकताको नाउँमा हुने गरेको सामाजिक विकृति , विसंगतिले दिनानुदिन नेपाली समाज ग्रसित छ ।आजका जल्दाबल्दा युवा तन्नेरीहरुमाझ देखीएको आधुनिकताले समाजको रुपरंगमै गलत प्रकारको परिवर्तन देखिन थालेको छ जसले ...
दलितले छोएको खान्छु, बाहुनले छोएको खान्न
म दलितले छोएको खान्छु । भोटे, सार्की ,कामी ,दमाइ ,पोडे, मगर सबैले छोएको खान्छु । तर यादहोस जो धर्मको नाममा पुरातनवादी सोचले लिप्त भएर आफुलाई कट्टर बाहुन भनेर दाबी गर्छन, आज उप्रान्त त्यस्ता ब्यतिmहरूल...
‘मामु म एक दिनभरी तपाँईको काखमा बस्छु । अनि कुरा गर्छु ल । बाबाआमा नभएको बेलामा । मामु धेरै कुरा गर्नुछ तपाँईसंग । ६ बर्षकी छोरीले आमासँग कुराकानीका लागि याचना गर्दा आमाको मन कस्तो होला ? मामु मलाई आम...
'जब पर्खालले नछोपिने दृश्यहरु बिचारका धर्काहरुले छोपिदिन्छन तब मस्तिष्कहरु भ्रमित हुन्छन् ।' त्यस्तै नेपालीको धर्म, कर्म र संस्कारलाई पाखा लगाएर आमा समानकी सासु आमालाई किन ढोग्ने भनेर आफुलाई अपमानित स...
आत्मकथा प्रकाशनको अन्तिम धपेडीमा छन्, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, ६६ । १ लाख ११ हजार शब्दले पनि उनको धीत मरेको छैन । उनी लेखनलाई सक्दो ‘ह्युमरस’ बनाउन चाहन्छन् तर भइदिन्छ ‘सिरियस’ । नहोस् पनि किन ? क्यान्सरपी...
सप्तरीमा कुपोषणको कारण गत मंसिर १२ गते १७ बर्षिय युवक शम्भु कुमार रामको निधन हुन पुगेको छ । गरिबीको कारण एक पेट खान समेत नपुग्ने परिवारमा जम्मेका उनी भोक भोकै बस्नुको कारण मृत्युको शरण पर्नु प¥यो । भा...
सूर्यले थानकोटको उकालो चढ्दै छ । दिउँसो तितरवितर मान्छे विस्तारै बाक्लिैदै छन् । रत्पपार्कको पश्चिम वीर अस्पतालको अगाडी सडक पेटीमा ठेलम-ठेलको अवस्था छ । मंसिरको चिसो बढ्दैछ मान्छेहरु जीउ न्यानो पार्न ...
काठमाडौं, १४ मङ्सिर । नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि अधिक मात्रामा श्रममूलक नै छ । अर्थतन्त्रका केही सामान्य क्षेत्रबाहेक अन्य प्रायः सबै आर्थिक गतिविधिहरूमा आधुनिक प्रविधि प्रवेश गरेकै छैन भन्दा पन...
होटल प्याराडाइजको रूम नं १५ मा छु एक्लै। यो होटल बुटवलको हो। साथीहरू रेयुकाई १८ औं शाखाको सेमिनारमा गएका छन्। म भने अलि बिसञ्चो भएको कारण गइन। हिजोमात्र लुम्बिनी घुमेर आएकोले गर्दा थकान थोरै आफूमा उ...
थान्का र पौवा कलामा हरित तारा भृकुटीलाई हरिततारा पनि भनिन्छ । उनको विवाह १६ वर्षको उमेरमा तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोसंग सन् ६३९मा भएको थियो । उति बेला तिब्बत अशिक्षित र अविकसित रहेको र त्यसको कारण...
मानिसका दैनिक जीवन निर्वाहका चालचलन, रीतिरिवाज आ–आफनै जातीय, धार्मिक, वर्गीय एवम् वातावरणीय हिसाबले निर्धारण भएका हुन्छन् । एक खालको क्रियाकलाप कुनै एक समाजमा वर्जित हुनसक्छ भने अर्को समाजमा त्यही क...
लोकले नमानेका लोकमान
तत्कालिन शाही शासनका मुख्य सचिब लोकमान सिंह कार्की २०६२र६३ सालको जन आन्दोलन दबाउने मतियार मध्येका मुख्य एक पात्र हुन देशमा शासन परिवर्तन भयो ब्यबस्था बदलियो तर उनै लोकमान बदलीएनन तिनै लोकमान लाई राजनै...
कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका भित्रको बडा नं. २ मोतियाफाँटा राज्यले बिर्सेको बस्ती जस्तै बनेको छ । गुजुमुज्ज छाप्राको घनाबस्ती एक घरमा एक अर्को घर जोडिएको आँगन नै नभएको घर । घर पछाडी वारीको डिल...
नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी (केन्द्र)ले लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध महाअभियोगको प्रश्ताव पारित गराउने लबिंङ् गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस भने लोकमानसिंह कार्कीको सुरक्षित र सम्मानजनक अवतरणको निम्ति बहान...
अख्तियार प्रमुख माथि महाभियोगले नेपाली जनमानसमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । अख्तियार प्रमुखले पदिय आचरण विपरित कार्य गरेको भनि एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदद्वारा महाभियोग दर्ता गरेको फलस्वरूप लोकमान सि...